Imibukiso ayivunyelwe ngokuzenzakalelayo nge-Prepar3D v4. Ngithola umlayezo wephutha lapho uvula i-P3D
Abasebenzisi be-Prepar3D v4 entsha: Ukulandela ushintsho lwe-charset ku-Scenery.cfg kuya ku-UTF-16LE abafakezi-auto abangeke besakwazi ukuvumela indawo yakho ngokuzenzakalelayo.
Isixazululo sesikhashana: Vula ifolda C: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 bese uvula ifayela le-Scenery.cfg nge-Notepad bese uchofoza ifayela - Londoloza njenge ... Ewindini evula ukhethe UTF-8 enkampanini Yokubhala (bheka isithombe ngezansi) bese uchofoze Londoloza.
Faka kabusha indawo futhi uphawule.
Lokhu kulungiswa kufanele kuphindiwe ekufakweni kwendawo ngayinye ngoba i-P3D iphinda ilondoloze ifayela le-Scenery.cfg ku-UTF-16LE ngemva kokuvula ngamunye.
Imibukiso yengezwe ngemuva kuka-Septhemba 6, i-2017 ayithintekile ngalolu daba.
Sibuyekeza umfakisi othomathikhi wezwe ngalinye, inkinga izolungiswa maduzane, kodwa kuthatha isikhathi esithile.
ngoLwesine ngo-September 07 by rikoooo